Iindaba - Ungazikhetha njani izinto kunye nobugcisa besikhwama sesipho ngokuchanekileyo?
Ungazikhetha njani izinto kunye nobugcisa besikhwama sesipho ngokuchanekileyo?
Iingxowa zesipho sePhepha zezona zingxowa zithandwayo zithandwayo okwangoku. Ngenxa yexabiso eliphantsi kunye nefuthe elilungileyo lokushicilela, liyathandwa ngabarhwebi abaninzi. Ke zeziphi izinto eziphambili zeengxowa zesipho sephepha? Zeziphi ezinye izinto zobugcisa eziqhele ukufunyanwa kwiingxowa zezipho ngamaxabiso asezantsi kodwa zibe neziphumo ezimangalisayo?
Iphepha lasekhaya linobunzima obugqwesileyo, akukho lula ukukrazula, akufuneki ukuba lifakwe, kwaye liziva lilungile. Kodwa ngenxa yobume bayo obulunge ngakumbi kwaye ingekho lula i-inki, umphumo wokushicilela awulunganga njengephepha elilodwa lomgubo.
Iphepha elikhethekileyo lihlala libhekisa kuhlobo lwephepha elinexabiso elongeziweyo lokusebenza kunye nenjongo ethile. Xa kuthelekiswa nephepha eliqhelekileyo, iphepha elithile lineempawu zokusebenza okuphezulu, ixabiso elongeziweyo, umxholo wetekhnoloji ephezulu kunye nomjikelo wobomi obufutshane. Iphepha elikhethekileyo eligutyungelweyo linempembelelo entle yokushicilela, ngelixa iphepha elikhethekileyo elingavulelwanga livakala kamnandi. Ezona ntlobo ziphambili ziyiphepha leeperile, ikhadibhodi enombala, igolide kunye nekhadibhodi yesilivere, iphepha elinepateni njalo njalo.
2. Inkqubo: Inkqubo eqhelekileyo yeebhegi zezipho zamaphepha zibandakanya ukunamathisela, ukubopha, i-UV, i-laser convex, njl. Ezi nkqubo zineempawu zazo, kwaye abathengisi banokukhetha ngokweemfuno zabo.
Elaminethiweyo ifilimu, ifilimu esisidenge okanye ifilimu ekhanyayo, iingxowa zephepha ezigutyungelweyo zinabom ngakumbi, ubungqina bokufuma kunye nokuchasana nokusilela.
Ukunyathela okushushu kubonakaliswa ngokuqaqambisa ubume bentsimbi, kwaye isetyenziselwa ngokubanzi ukuqaqambisa ulwazi oluphambili ekupakishweni okanye kwilogo yophawu. Umbala wephepha lokuhombisa ucebile, kukho igolide, isilivere, luhlaza okwesibhakabhaka, bomvu, njalo njalo, unokukhetha ngokweemfuno zakho.
Inkqubo yendawo ye-UV isetyenziselwa imifanekiso okanye uphawu lwelogo kwiingxowa zesipho ezigqunywe yifilimu esisimumu, enokuthi yenze umahluko oqinileyo kwinkangeleko kunye nokuziva kwefilimu esisimumu ukufezekisa injongo yokuqaqambisa amanqaku aphambili.
3. Izinto ezincedisayo: Izixhobo eziqhelekileyo zeengxowa zesipho yimitya yesandla. Ngokubanzi, iintambo ezinokusetyenziselwa iibhegi zamaphepha eziphathwayo ziintambo ezinemicu-ntathu, intambo yenayiloni, intambo yomqhaphu, ibhanti eboshiweyo, njl. thintela ibhegi yesipho Krazula ibhegi yesipho ngelixa uyikhankanyayo.
Ibhegi yesipho esipheleleyo siqulathe ikakhulu la malungu angentla. Ewe kunjalo, ngokweemfuno ezahlukeneyo zeshishini ngalinye, izinto eziphathekayo, ezokuprinta kunye nezobugcisa kwiingxowa zesipho zahlukile. Ke ngoko, amashishini anokuziqonda ngononophelo izinto ezikhoyo kunye nobugcisa beengxowa zamaphepha ngaphambi kokuba ziqhelaniswe neengxowa zesipho, ukuze zikwazi ukwenza isindululo esifanelekileyo